China Nguruve Nipple Mvura Inonwa Mugadziri uye Mutengesi | Marshine
Ichi chigadzirwa chinoumbwa nemvura tsime muviri, hunde, simbi bhora. Kana nguruve ichinwa mvura, snout pusher stem, jacking kumusoro simbi bhora, mvura inoyerera ichibuda nemipaka pakati pebhora uye tsime remvura. Simbi bhora uye hunde negiravhiti reset mushure mekunwa mvura, panguva imwechete pasi pechiito chemvura yekumanikidza yakasimba yakavharwa nzvimbo yekubuditsa mvura.
Otomatiki yenguruve yekumwa mvura ine simbi isina tsvina dhizaini yenguruve kunwa zvakachena uye kuchengetedza mvura. Isimbi isina kunwa nyini inonwa ine hunde, iyo inguruve inofamba nekurumwa kuburitsa mvura. Uye inogara yakasimba uye haina kukanganiswa nengura. Nguruve painobvisa muromo wayo, dzinde rinodzokera panzvimbo rakavharwa nesimba rakaomarara resilicone rabha diaphragm.
Nguruve zamu remvura rinonwa
1. Anonwa mvura yenguruve nesimbi isina tsvina anogona kuwanisa mvura yehutsanana yenguruve. Icho chakakosha chinwiwa chekushandisa chenguruve purazi.
2. Simbi isina ngura, anti-ngura, inopa mvura yehutsanana.
Mashoko 304 Simbi isina ngura
Net huremu 85g
Type Hoodle bhora mhando
Pasuru 5pcs / bhegi
1. Mhando yepamusoro
High mukurumari. Yakagadzirwa nesimbi isingaite 304. Mutumbi wakakora unochengeta munwi wakakwana kuramba ngura uye kusuka.
Chimiro chinonzwisisika. Kupaza kwakaratidza.
Kuyerera kwemvura kumwe chete.
Sefa skrini ine yakanyanyisa kukora isina tsvina inogona kusefa kwakawanda kwetsvina mumvura uye ine hupenyu hwakareba hwebasa.
Mvura inoyerera ichingoerekana yaitika kana nguruve yabata switch, uye kudzima otomatiki painosiya. Semupombi wemvura, haingochengetedze mvura chete, asi zvakare inopedza kushandiswa kwevashandi.
Pashure: Nguruve Bhora Ruma Nyatso Kunwa
Zvadaro: Nguruve Dhadha-Yakabhadharwa Mvura Inonwa